सदैव व्यवसायीको हितसगैँ समग्र चितवनको विकास लागि ज्ञानेन्द्रमान मैदानमा ! (भिडियो) – Saurahaonline.com
सदैव व्यवसायीको हितसगैँ समग्र चितवनको विकास लागि ज्ञानेन्द्रमान मैदानमा ! (भिडियो)
चितवन : चितवनका व्यवसायी ज्ञानेन्द्रमान शाक्य जिल्लाकै लोकप्रिय जनप्रिय व्यवसायी हुन् । बाजेका पालादेखि व्यवसायमा अब्बल शाक्यको व्यापार जिवन निकै लामो त छदै उनले गरेका सामाजिक काम पनि त्यतिकै सम्मान योग्य छ ।
नारायणगढ बजारमा नै पहिलो प्लाजा खोलेका उनले व्यवसायलाई समय अनुकुल रुपमान्तर गर्दै लागेका छन् । हिजो सामान्य सुनचाँदी व्यवसायका शाक्य आज जिल्लाकै अब्बल व्यवसायी बनेका छन् ।
उनले लोकमान प्लाजाभित्र विभिन्न थरीका व्यापारिक पसलहरु खोलिए । जसले आज जिल्लाको बजार क्षेत्रमा नयाँ नयाँ प्लाजा र महल कडा भएका छन् । व्यापार बढेको छ । बजार विस्तार भएको छ । दिगो फरक भिजनसहित आफुहरुलाई हरेक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेसगैँ नयाँ तरिकाबाट अगाडी बढेका शाक्य सरल र मिलनसार व्यक्तित्वका धनी मानिन्छन् । २०२१ सालमा बुबा लोकमान शाक्य नारायणगढ आएपछि उनको परिवार यहाँ सुनचाँदी गरगहनाको व्यापारमा लागेको थियो । लोकमान शाक्यले सुरूवात गरेकोे यस व्यापार उनको तेस्रो पुस्ताले अहिले धानिरहेको छ । लोकमानका छोरा ज्ञानेन्द्रमान आफ्नै बाबुको नाममा गरगहना पसल स्थापना गरी चितवन र आसपासका क्षेत्रमा गुणस्तरीय गहनाको व्यापार गर्ने व्यक्तिका रुपमा चर्चित बनेको छ । विश्वास जितेको छ । लोकमान एण्ड सन्स सुनचाँदी पसल आज गरगहना किनबेचको क्षेत्रमा विश्वसनीय पसलका रुपमा परिचित छ ।
उनले आफ्ना उत्तराधिकारीका रुपमा रहेका दुई छोराहरुलाई नै उनले सबै व्यापार सुम्पिदिएका छन् । त्यसै कारणले पनि हुन सक्छ, दुई जना छोराहरु निलेनमान शाक्य र शैलेन्द्रमान शाक्य अहिले बाबुले कमाएको मानप्रतिष्ठा र असल व्यापारको बाटो हिँडिरहेका छन् । व्यावहारिक ज्ञानले तिखारिएको शाक्यका लागि समाजसेवा मन पर्ने क्षेत्र हो । समाजसेवा गर्न पाउँदा उनी आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्छन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाको प्रमुख एवम् प्रतिनिधि पात्रका रुपमा शाक्यले धेरै नै उत्कृष्ट सामाजिक कार्यहरु गरिसकेका छन् । सामाजिक काम गरेर कहिल्यै नथाक्ने र नअघाउने प्रतिक्रिया दिएका शाक्यले अबको बाँकी समय व्यापार व्यवसायभन्दा पनि सामाजिक क्षेत्रमा बढी खर्चने बताए । शाक्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पद रहेर नेतृत्वका लागि अनुभव समेत हासिल गरेका छन् ।
त्यस्तै, उनी नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका विशेष सल्लाहकार पनि हुन् । छिटो निर्णय लिन सक्ने, सामाजिक काममा अघि बढिहाल्ने, मिलनसार, व्यावसायिक हितका लागि सबैसँग मिलेर काम गर्न सक्ने क्षमताका व्यक्तिका रुपमा ज्ञानेन्द्रमान शाक्य सबैमा परिचित छन् । उनै शाक्य यतिवेला उवासंघ चितवनको नेतृत्वको लागि मैदानमा छन् । आफुले उवासंघ चितवनमा विग्रएको सिस्टमलाई सुधार गर्नसगैँ व्यवसायी एकताका लागि आफुले उम्मेदवारी दिएको बताए । उनले अगाडी भने – ‘पहिलो काम म करको समस्या समाधान गर्छु। सरकाले लगाएको करको बिषयमा कतिपयले व्यावसायी थाहा नपाएको अवस्था छ । त्यो सम्बन्धी विज्ञ ल्याएर तालिम गराउने मेरो सोँच छ । व्यवसायीका लागि बिशेष तालिमको व्यवस्था गराउँछु ।’
हक्की र निडर स्वभावका शाक्य व्यवसायीहरुलाई परेको बखत जुनसुकै बेला र जस्तोसुकै सहयोग गर्न सक्ने भएको आफुले व्यवसायीहरुको हक र हितका लागि आफनो उम्मेदवारी रहेको बताउछन् । उनले अब आफु समग्र व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने र सदैव व्यवसायीका हक हितका पक्षमा उभिने बताएका छन् । पुरै जीवन व्यवसायीक हित र समाज सेवामा खर्र्चीने उद्धघोष पनि गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतीमा भोटरको कदर नगरेकै कारण र कोठे प्रवृत्ति हावी गर्न थालेपछि आफुले उम्मेदवारी दिएको बताउदै बजार व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, कर, स्थानिय कर, घर वाहल कर, नारायणी नदी क्षेत्र व्यवस्थापनसगँै समग्र जिल्लालाई नमुना बनाउने एजेण्ड अगाडी ल्याएको बताए । भने चितवनमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विषयमा विशेष रणनीतिसहित नयाँ आयम ल्याउने दावी पनि गरे ।
यति मात्र शाक्यसगँ व्यावसयीक हकहितका लागि काम धेरै काम गरेको बताउदै विभिन्न संघ संस्थामा लामो समय रहेर काम गरेको अनुभव छ ।
उनले भने– ‘मैले काम गर्न सक्छु भन्ने कुरामा व्यावसायीहरु आशावादी हुनुहुन्छ त्यसैले मलाई मतदान गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको छु । फेरि पनि नयाँ धेरै एजेण्डाहरू छन्, व्यवसायीहरूका निम्ति धेरै गर्नु छ । अन्त्यमा, म लगायत सम्पुर्ण टिमलाई अत्याधिक बहुमतले बिजय गराउन आम व्यावासयीहरू सँग आग्रह गर्दछु ।’